Ihempe yaseTshayina yamadoda e-Polo yesiko ekwenziweni nakwifektri ISAPPARELS
Ihempe yesiko yamadoda
Uhlobo: Ihempe yesiko yamadoda
I-logo: yoshicilelo lwesilika, ukuprinta ngokuthe ngqo kwidijithali, ukuhanjiswa kobushushu, ukuhonjiswa, islimlimation, ibheji, ii-patches ze-pvc, ushicilelo olubonakalisayo, ilogo ye-TPU, usetyenziso
Iqela lakho liya kusithanda isitayile sale Contro yeNtsebenzo yePolo kumsitho wakho olandelayo. Ukugcina isantya esikhawulezayo eofisini okanye kwikhosi khange kubonakale kulungile. Yenziwe nge-100% ipholiyesta, ziyilaphu elinobunzima. Zibonisa ukufuma-wicking, ukomisa ngokukhawuleza, kunye nemibimbi- kunye netekhnoloji yokumelana ne-snag. Oko kuthetha ukuba kuphela kweemisonto oya kuthi uzibethe kumdlalo wakho ngasemva zisithoba.
Uhlobo: ihempe yepolo
Ubungakanani bephakheji: 25X25X2 cm
Ubunzima bendwangu 180g-230g
6. Sineentengiso zethu zehoseyile emgceni.
Pls jonga www.isapparels.com ngobungakanani obungaphantsi kwe-1000 ii-pcs kwinto nganye.
Egqithileyo Amadoda isikipa somqhaphu ipolo
Okulandelayo: Ihempe yamadoda yeZipper Collar
Mens Mfutshane sleeve Half Zi ...
Ihempe yomdlalo wePolo
Ihempe zabesilisa zamadoda 1 ...
Amadoda isikipa yomqhaphu polo l ...